Ithagethi yeeGlasi zoMntu zoCocwa nguMoya China Manufacturer
Inkcazo:Ithagethi yeMishumififier,Ithagethi yokuHambisa uMntu,Ithagethi yokucoca umoya
Home > Imveliso > Ihotele Humidifier > Ithagethi yeeGlasi zoMntu zoCocwa nguMoya
Umzekelo No.: DT-1822Q
[Uyilo lweeGlasi zeZilo eziZodwa] Uyilo lweglasi lenza umboniso omuhle kwaye ulungele nawuphi na umhlobiso. Le suti yahlukileyo yeoyile yegumbi lomntwana, ikhaya, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlala, iofisi, ispaza, i-yoga, njl.
[Umbala we-7 Wokukhanya] Ungayibeka ngombala othile okanye imibala eyi-7 ijikeleze ngokwayo. Ungacima isibane njengoko ufuna xa sisebenza.
[Umsebenzi we-Auto Shut-off] ngenkqubo yokukhusela eyomileyo eyomileyo, i-aroma diffuser iyacima ngokuzenzekelayo xa iphelelwe ngamanzi. I-Aromatherapy diffuser intle kuba ungalala nayo kuyo okanye uyiyeke xa iphuma ibaleka ngaphandle kokuba unexhala lokuba isiphazamisi sasekhaya sizoqhubeka sibaleke kwaye songa amandla ngokunjalo.
[I-Whisper Quiet & Qualty Warranty] Ngobuchwephesha obuphambili be-ultrasonic, le disuser ye-ultrasonic isebenza ngaphandle kwengxolo. Akusayi kubakho nakuphazamiseka xa ulele, usebenza okanye ufunda.
Ukusebenza kweoyile efunekayo yeoyile
Ithagethi yeMishumififier Ithagethi yokuHambisa uMntu Ithagethi yokucoca umoya Ithagethi yeMist Humidifier Ithagethi ye-Usb Humidifier Ithagethi yeUtrid Humidifier Ithagethi yeMisidifier yeMini Ithagethi yeyona Humidifier